Vaovao - Ny iraka Chang'e-5 an'i Shina dia namerina santionany tamin'ny volana ka hatramin'ny tany
Ny iraka Chang'e-5 an'i Shina dia namerina santionany tamin'ny volana ka hatramin'ny tany
Hatramin'ny 1976, ny santionan'ny vatolampy volana voalohany niverina teto an-tany dia nidina. Tamin'ny 16 Desambra, ny sambon-danitra Chang'e-5 any Shina dia namerina fitaovana manodidina ny 2 kilao taorian'ny fitsidihana haingana ny fizotry ny volana.
Nidina teny amin'ny volana ny E-5 tamin'ny 1 desambra, ary niainga indray tamin'ny 3. Desambra fohy dia fohy ny fotoanan'ny sambon-danitra satria mandeha amin'ny herin'ny masoandro izy ary tsy mahazaka ny alina mamirapiratra amin'ny volana, izay manana maripana ambany -173 ° C. Maharitra 14 andro eo ho eo ny tetiandro amin'ny volana.
"Amin'ny maha mpahay siansa amin'ny volana ahy dia tena mampahery izany ary afa-po aho fa niverina teto an-tampon'ny volana voalohany tao anatin'ny 50 taona." hoy i Jessica Barnes avy amin'ny University of Arizona. Ny iraka farany hamerenana santionany avy amin'ny volana dia ny fanadihadiana Soviet Luna 24 tamin'ny 1976.
Rehefa avy nanangona santionany roa ianao dia makà santionany iray amin'ny tany, ary makà santionany iray avy eo amin'ny 2 metatra ambanin'ny tany, avy eo ampidiro ao anaty fiakarana miakatra, ary avy eo atsangano mba hiditra ao amin'ny boriborin'ny fiaran'ny misiôna. Ity fivoriana ity no fotoana voalohany nitrangan'ny sambon-danitra robotika niantsona tanteraka tany ivelan'ny orbit Earth.
Ny kapsily misy santionany dia nafindra tany amin'ny sambon-danitra miverina, izay nandao ny orbit lunar ary niverina nody. Rehefa nanakaiky ny tany i Chang'e-5 dia namoaka ilay kapsily, izay nitsambikina avy tao amin'ny habakabaka indray mandeha, toy ny vatobe mitsambikina ambonin'ny farihy, miadana alohan'ny hidirany amin'ny atmosfera ary mametraka parasyute.
Farany dia tonga tany Inner Mongolia ilay kapsily. Ny sasany amin'ny moondust dia hapetraka ao amin'ny Hunan University any Changsha, Sina, ary ny ambiny kosa dia haparitaka amin'ny mpikaroka mba hamakafaka.
Ny iray amin'ireo fanadihadiana manan-danja indrindra izay hataon'ny mpikaroka dia ny fandrefesana ny taonan'ny vatolampy amin'ireo santionany sy ny fiantraikan'izy ireo amin'ny tontolon'ny habakabaka rehefa mandeha ny fotoana. "Heverinay fa ny faritra nipetrahan'ny Chang'e 5 dia maneho ny iray amin'ireo lava indrindra faralahy mikoriana ambonin'ny tany," hoy i Barnes. "Raha afaka mametra tsara kokoa ny taonan'ny faritra isika, dia afaka mametraka fameperana henjana kokoa amin'ny taonan'ny tontolon'ny masoandro manontolo."
Fitaratra fitiliana fiara, Fakan-tsary fakan-tsary, Masinina scanner X-Ray azo entina, Rafitra fizahana fiara fitaterana finday, Scanner X-Ray Portable, Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina,